Tonga soa eto amin'ny Simatech
Ny Mpisavalalana Of Silk-technoloy
Simatech Inc. dia Biotech orinasa mifantoka amin'ny orinasa mpamokatra entana, ny mazava ho ampy, biodegradable landy fibroin biomaterials sy ny fampandrosoana ny fanjakana-avy-ny-kanto teknika isan-karazany biomedical fampiharana. Isika no manararaotra teo amin'ny sehatry ny fitsaboana maso fitaovana sy zava-mahadomelina fanaterana mampiasa landy fibroin ho toy ny fitaovana fototra mamoron-. Ny fototra teknolojian'ny sy ny format manan-tompo maromaro vokatra rehefa mandroso, Simatech hanao fandraisana anjara handresy ny aretina sy hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana. Ao Simatech, isika manao ny tsara indrindra mba hanohanana ny asa fikarohana sy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanomezana fitsipika sy namboarina fibroin vokatra landy. Izahay mpiara-miasa ihany koa ny mety mandray manerana izao tontolo izao mba hijery ny fampiharana saha vaovao sy hanana vokatra vaovao amintsika.
Nahoana ianao no tokony Diniho ny Products?
B asic fitaovana
Ny landy fibroin nanome vokatra azo mivantana ampiasain'ny mpanjifa ho toy ny fototra akora mamorona teti-bebe kokoa fitaovana isan-karazany fibroin landy.
E ssential fepetra
Goavana amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny foto-drafitrasa efa mandroso modely procédure; -Tsara orina rafitra fanaraha-maso ny kalitao.
S İlk loharano
Silk, malaza ao Shina lamba ara-nofo, mety ho mora foana, ary ampy ho nahazo na manta ampiasaina dandy na kofehy avy amin'ny faritra atsimon'ny Reniranon'i Yangtze, fantatra amin'ny anarana hoe "ny tanindrazany ny landy" mahery 3000 taona.
T echnology sy ny patanty
Ny vokatra voatanisa dia mifototra amin'ny ny fototry ny teknolojia sy ny fananana ara-tsaina tokana zo an'ny Simatech Inc.